I-Mozenda iyisetyenzisi esisebenzayo kwi-intanethi kulabo bafuna ukukhipha idatha kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ngokukhawuleza. Ngamava aneminyaka engaphezu kwe-10, le software yesitoreji sedatha inikeza okukhethwa kukho okulula ukwenza umsebenzi wabahlalutyi kunye nabenzi bezigqibo. Inika isixhobo esibonakalayo somsebenzisi esivumela ukuba abasebenzisi baqokele inani leedatha kwimithombo eyahlukileyo, njengoluhlu lwexabiso, imibiko yeendaba, ukuphonononga, ulwazi lokunxibelelana kunye nezinye ezininzi. Ngaphandle koko, bangakwazi ukuhlela yonke idatha yabo kwifayile ethile ukuze bawenze kakuhle kwi shishini labo.
Iingeniso zokusebenzisa iMozenda Software
Yisiplani sesofthiwe esilula, apho abasebenzisi banokukhahlela kunye nokugcina idatha kwikhompyutha yabo. Ipakishwe nenani lezicelo ezinkulu, ngokukodwa kumashishini kunye nabathengisi. Inika ithuba lokukhetha; banokwenza izinto ezifana nokufumana ulwazi ngokuseka i-budget, ukujonga ixabiso, ukubikezela nokuhlalutya amaxabiso emveliso.
Abakwa-Webscrapers banethuba lokuqokelela ulwazi oluninzi njengoko bafuna ngexesha langempela nakwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. I-Mozenda isebenzisa ubuchwepheshe befu ukwenzela ukuba abasebenzisi bayo banamathuba amangalisayo. Ngokomzekelo, ubanikezela ukufikelela kwedatha ephathekayo, ekhuselekileyo kunye neyindleko kunye nezinye izinto ezimangalisayo zokubanceda bazalise ngempumelelo umsebenzi wabo..Basenokusebenzisa yonke idatha edibeneyo kwiwebhsayithi ukuze bahlule kwiindidi ezahlukeneyo zolwazi ukuze bahlalutye ngendlela engcono. Ngenxa yoko, abaphathi beentengiso kunye nabathengisi banokwandisa ukusebenza kweshishini labo kwaye baphumelele ngakumbi kunabo abakhuphisana nabo.
Abasebenzisi akudingeki ukuba babe nezakhono zeprogram ezikhethekileyo zokusebenzisa le nkqubo yokukhupha idatha. Ngenxa yoko, abaphathi abafuna ukufumana iinkcukacha zewebhu ezichanekileyo bangasebenzisa le software ngaphandle kokubandakanya abantu abaninzi kwinkqubo. Bangakwazi ukwenza umsebenzi ngokwabo ngokukhawuleza ngaphandle kokuchitha imali eninzi ukuba baqeshe abaprogram. Ngokomzekelo, banokwakha iiseti ezahlukeneyo zeedatha kwaye bafumane iziphumo abazifunayo ngokukhawuleza ukwenzela ukuzalisekisa iinjongo zabo. Ngokukodwa, bangasebenzisa amafomathi athile, njenge-XML, ukuze bafumane yonke inkcazelo ebalulekileyo.
I-Mozenda inikezela i-web scrapers iqela lokuxhasa abanamava ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi balo bayakukhuphela yonke inkcazelo abayidinga ngokufanelekileyo. Ngaphezu koko, le software yesicelo sedatha isekela izicwangciso zokuqeqeshwa ezikhethekileyo zabasebenzisi bayo ukuze bancede bazalise umsebenzi wabo ngempumelelo. Banokuphinda bahlaziye iiprojekthi kunye nabasebenzisi ukuba bancede benze zonke izilungiso eziyimfuneko. Abasebenzisi banokufumana ifowuni okanye inkxaso ye-imeyile kwaye banokufikelela kwiforum, iblogi, inkxaso ye-imeyili kunye namavidiyo okuqeqesha. Iingcali zeMozenda zihlala zikulungele ukwakha nokugcina iiprojekthi zabasebenzisi bayo ukuba zibancede zigcine ixesha.
Ngokusebenzisa iMozenda, abaphandi bewebhu bangenza uluhlu lwezinto ezibalulekileyo. Ngale ndlela bayakwazi ukwakha iiseti zeenkcukacha ezichanekileyo. Bamele baqakraze ukuchonga iibhile ezikhethekileyo kunye nexabiso kwaye ke banako ukugcina idatha yabo ngegama ngalinye-xabiso legama kwintsimi eyahlukileyo.
Xa abaphathi befuna ukufumana isofthiwe engcono yokufumana idatha, iMozenda yinto ekhethekileyo. Kulula, ngokukhawuleza kwaye inokusetyenziswa ngamashishini anenjongo yokunciphisa abakhuphiswano kunye nokukhuthaza ukusebenza kwabo.